Akwụkwọ Ejiri Egwuregwu Na-eme N'Ịntanet - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Blog akụkọ Akwụkwọ Ejiri Ejiri Ejiri Na-eme Ihe N'Ịntanet
adminaccount888 15th April 2019 Akụkọ kacha ọhụrụ
Enweghị ihe ijuanya mana ọ ka bụ ihe egwu !! Oke aka
Ọchịchị Briten nọ ogologo oge Akwụkwọ White na Egwuregwu Online mechara pụta na 8th April 2019. Ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha ngwa ngwa (ish), ntọhapụ ndị a tọhapụrụ na Ụlọọrụ Home bụ Ebe a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ mmeghachi omume site n'aka onye ghọtara ngalaba a, lee bụ blọọgụ ọbịa. John Carr, onye ọkachamara na-eduga, na-ede…
Children'smụaka, ndị nne na nna na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara obodo anabatala ya nke ọma. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ akwụkwọ ọnụego izizi, na-egosi mmalite nke usoro ọhụụ gbasara ọchịchị ịntanetị na UK. Agbanyeghị, onye ọ bụla maara ihe na-eme ebe a nwere nkuzi nke oge a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya na ụwa. Enwere ihe kpatara ya.
Nke a bụ akụkọ m:
Kedu onye gafere?
Ụlọ ọrụ dị "Na" bụ ndị nke "Kwe ka ndị ọrụ nwee ike ịkekọrịta ma ọ bụ chọpụta ọdịnaya sitere na onye ọrụ ma ọ bụ nwee mmekọrịta na ibe gị n'ịntanetị." Echere m na nke ahụ bụ ụzọ ọzọ isi kwuo "Mgbasa ozi ọha na eze". Mana enwere ike ịgafe karịa ụlọ ọrụ ndị echere dịka ebe nrụọrụ na ọrụ mgbasa ozi.
Ọrụ iwu nke nlekọta
Isi nke White Paper bụ ebumnuche ekwuputara iji guzobe ọrụ nlekọta ọhụrụ nke nlekọta iji mee ka ụlọ ọrụ nwekwuo ọrụ maka nchekwa nke ndị ọrụ ha ma merie nsogbu nke ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ na ọrụ ha kpatara.
Nkwenye nke onye nduzi onwe ya
A ga-ehiwe usoro iwu ohuru. Na usoro omume ọ ga-ewepụta ihe a tụrụ anya n'aka ụlọ ọrụ tozuru etozu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ ịrụzu ọrụ ekwuru n'ụzọ ekwesighi na koodu, ha ga-akọwara ma kwadoo onye na-achịkwa otu ụzọ ọzọ ha ga-esi mee ka otu mmetụta ahụ dị ukwuu ma ọ bụ karịa.
Usoro ụlọ na ụlọ ọrụ na-enweta mkpa dị mkpa
Usoro azụmahịa na ọnọdụ ọrụ ga-abụ ihe doro anya ma dị mfe, gụnyere ụmụaka na ndị ọrụ ndị ọzọ na-adịghị ike. Nke a abụrụla ihe GDPR chọrọ nke nwere ike ịkọwapụta nke ọma na koodu omume na ụdị afọ kwesịrị ekwesị nke UK nzuzo (ICO) ga-ebipụta n'oge na-adịghị anya (?)
N'ikwu ya n'ozuzu, onye nlekọta ọhụrụ ahụ ga-enyocha otú otu usoro ụlọ ọrụ si arụ ọrụ. Iji kọọ akụkọ ya na iji duzie usoro iwu ya, onye nchịkwa ahụ ga-enwe ike ịchọ akụkọ sitere n'aka ụlọ ọrụ.
Nwee ezi uche ma kwadoo
Onye nchịkwa ahụ ga-atụle ikike nke ụlọ ọrụ iji mee ihe iwu chọrọ, gụnyere ịbịaru nke nhazi ha na njirimara nke njirimara na ịdị njọ nke nsogbu ahụ.
A ga-etinyekwa aka na nke a n'ime iwu nke ga-eme ka o doo anya na ụlọ ọrụ dị choro ime ihe kwesiri ekwesiri na ihe kwesiri ime iji mebie nsogbu ha (mmesi ike m).
Onye nchịkwa ahụ ga-eme ka atụmanya doro anya nke ụlọ ọrụ dị iche iche kwesịrị ime iji mebie ọrụ iwu na-akwadoghị ma na-edebe ụmụaka ntanetị n'ịntanetị.
Enweghị nzube ịhapụ ụkpụrụ nke ikpo okwu nke ikpo okwu mana
"Usoro nduzi ọhụrụ (ga - ewe) n 'uz o kachasị mma (site n'ịba ụba) ibu ọrụ ndị ọrụ ahụ nwere na njikọ weebụsaịtị na -
Ana m atụ anya na nke a ga-eduga n'ọtụtụ ọkwa nke PhotoDNA na algorithms nke nwere ike ịchọpụta ihe ndị dị na paedophilic na àgwà ndị ọzọ na-emerụ ahụ dịka ịmegbu mmadụ.
Ịkpọ aha, ịkpa ọchị na nghọta
Onye nchịkwa ahụ ga-enwe ike dị ukwuu iji chọọ ụlọ ọrụ iji nye ya ozi. Mgbanwe ga-abụ akụkụ dị mkpa nke ọchịchị ọhụrụ ahụ. A ga-akpọpụta ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Iwu, igbochi na ọrụ mpụ
Onye nchịkwa ahụ ga-enwe ngwaọrụ dịgasị iche iche iji kwado ma kwadoro iwu ahụ gụnyere ikike iji chefuo iwu ndị dị mkpa, nke nwere ike ịchọ ọbụna saịtị ma ọ bụ ọrụ ka a ga-egbochi. Ime ka ndị isi ụlọ ọrụ bụrụ ndị omekome na-akwụ ụgwọ maka ọdịda dị na kaadị.
White tinged na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
A na-ekwu na akwụkwọ White na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a pụtara na enwere ọtụtụ nkọwa dị oke mkpa iji rụọ ọrụ. Abụọ n'ime ihe kachasị mkpa bụ njirimara na ike nke onye na-achịkwa yana otu esi akwụ ụgwọ ya.
A otutu igwu egwu
Enwere oge nlekọta nke ọnwa atọ mana enweghi ike inwe obi abụọ na ihe ndị a ga-echegbu anyị karịa nke ahụ. A ga-achọ iwu. Nkewa dị iche, nke ahụ bụ obere ihe nwere ike mee ngwa ngwa.
Ihe omuma ọzọ nke obi ike ma o nwere nkwado zuru oke
N’ezie a ga-enwe arụmụka gbasara nkọwa dị mkpa. Agbanyeghị, ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile jikọrọ nke ọma n'ihe metụtara isi ihe dị na White Paper. Nke ahụ bụ n'ihi na echiche ọha mmadụ na-akwado ụdị usoro a. A ga-enwe ndị n’echiche echiche ndị ka na-eche na gọọmentị na ọgbakọ omebe iwu kwesịrị ịhapụ ihe ụdị a. Ma mana mgbe ọbụla Mark Zuckerberg na-akpọ oku ka ọ rụọ ụkpụrụ iwu, enwere m obi abụọ na ndị extremists ga - enweta traktị ọ bụla.
A kpọchiri ọnụ ụzọ nke Last Chance Saloon ma kaa akara.
Edere blog a na mbụ April 8, 2019 by John Carr. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ blọọgụ ndị ọzọ anyị kwadoro na John, lee ha.